Ungayibona kanjani iphasiwedi yenethiwekhi ye-wifi ku-Android | Kusuka kuLinux
Ungayibona kanjani iphasiwedi yenethiwekhi ye-Wi-Fi ku-Android
Lesi yisikhathi sesithathu ngithola i-imeyili isicela ukuthi sabelane ngamaqhinga e-android amandla bona iphasiwedi yenethiwekhi ye-wifi ku-Android Futhi noma ngabe ngiphendule ngamunye wabo ngendlela engiyisebenzisayo, ngicabanga ukuthi yisikhathi esihle ukusithatha kalula isifundo esilula sendlela yokwenza le nqubo encane kodwa ebalulekile.
1 Izidingo zokubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-Wi-Fi ku-Android
2 Inqubo yokubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-Wi-Fi ku-Android
Izidingo zokubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-Wi-Fi ku-Android
Ukuze sikwazi ukubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-wifi ku-Android kumele sibe nezimvume zezimpande (funda lapha kanjani Android) kudivayisi yethu, kubuye kube lula ukuthi kufakwe imenenja yefayela efana ne- I-ES File Explorer nanoma yimuphi umhleli wedokhumenti. Le nqubo kufanele isebenze kunoma iyiphi idivayisi nanoma iyiphi inguqulo ye-Android ehlangabezana nalezi zimo ezingenhla.
Inqubo yokubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-Wi-Fi ku-Android
Kukhona izindlela ezimbili zokubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-wifi ku-AndroidOwokuqala unesicelo esenzelwe wona futhi owesibili ukubheka iphasiwedi kufayela lokumisa le-Wi-Fi wonke amadivayisi we-Android anakho.
Ngokwami ​​rNgincoma ukuthi ungafaki noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukubona iphasiwedi yenethiwekhi ye-wifi ku-Android, kepha masenze inqubo yendabuko engiyifaka ngemininingwane engezansi:
Kusuka kudivayisi yethu ye-Android enamalungelo empande nokusebenzisa noma iyiphi imenenja yefayela esikuyo inkomba /data/misc/wifi, kuyo uzothola ifayela elibizwa nge- wpa_supplicant.conf Inolwazi lwawo wonke amanethiwekhi we-Wi-Fi oxhume kuwo, kufaka ne-password yawo. Buka leli fayela kunoma yisiphi isihleli bese uthola inethiwekhi ofuna ukwazi ngayo iphasiwedi, i- ssid imele igama lenethiwekhi futhi psk iphasiwedi yalo.
Enye indlela elula kepha engicabanga ukuthi ayidingekile ukuthi ufake uhlelo olufana ne- Iphasiwedi ye-WiFi, Ukubuyisa Ukhiye We-WiFi, Ukubuyiselwa Kwephasiwedi ye-WiFi Pro phakathi kwabanye, lezi zinhlelo zokusebenza zizokucela kuphela ukufinyelela kwezimpande futhi zizofaka kuhlu amanethiwekhi agciniwe anama-password awo.
Le nqubo encane impela yaziwa ngabafundi bethu abaningi, kepha ngiyethemba ukuthi izosiza kakhulu kulabo basebenzisi abadinga ukubuka amaphasiwedi e-Wi-Fi agcinwe kumadivayisi abo. Okubi kwendlela isidingo sokufinyelela izimpande (Yize kuyinto engincoma ukuthi sonke sinayo, kwesinye isikhathi akunakwenzeka), Angazi ukuthi ngabe ikhona yini indlela yokubona okhiye ngaphandle kokufinyelela kwezimpande, ngakho-ke ngiyabonga uma kukhona owaziyo nganoma iyiphi indlela, yishiye kumazwana abekiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayibona kanjani iphasiwedi yenethiwekhi ye-Wi-Fi ku-Android
Ngiyabonga kakhulu, yize ngingenakho ukufinyelela kwezimpande, (okwamanje) ngihlala ngithanda ukwazi amasu noma amathiphu ngale ndaba.
Ngiyabonga! Kuhle ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi ungazi kanjani iphasi.
Ungafaka futhi i-Wifikeyshare (Sebenzisa impande) kusuka ku-Fdroid njengenye indlela ye-GUI futhi kusivumela nokuthi sikhiqize amakhodi we-QR ukuze sabelane ngoxhumano lwe-Wi-Fi ngisho nange-NFC
A. Vazquez kusho
Ukusikisela: mhlawumbe lokho abaningi ababefuna ukukwazi ukuthi babona kanjani iphasiwedi ye-Wi-Fi abangayigcinanga kudivayisi yabo ... leyo-Wi-Fi abayithola eduze kwabo kepha abangakwazi ukuyisebenzisa ngoba iyabacela iphasiwedi abazi.
Yini ebilokhu yeba i-wifi yakwamakhelwane, akunjalo?
Awuhlakaniphile noma umncane ...
Uyazi ukuthi kukhona yini okungenzeka ukukwenza kusuka ku-iPhone ngaphandle kokuthi idivayisi ibangelwe? Ngiyabonga!
Angiwatholi amaphasiwedi agciniwe, empeleni namanethiwekhi, umbhalo nje engiwuqonda njengokumiswa okuthile hhayi okunye.
I-MotoG1, egxilile ngokusobala, ngesiphequluli se-Faze se-Amaze.